Uyongeza njani iibrashi kwiPhotoshop | Abadali be-Intanethi
I-Adobe Photoshop, ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeenkqubo ezisetyenziswa kakhulu ngabayili kwihlabathi liphela, ukuhlela iifoto kunye nokuzidala ukusuka ekuqaleni okanye ukuqala kweyabo imifanekiso. Kwaye kunjalo IPhotoshop yenye yezona nkqubo zigqibeleleyo zoyilo, kuba inenani elikhulu leenketho kunye nezixhobo.
Kwinqaku lanamhlanje, siza kuthetha malunga nesixhobo sokuxubha kunye indlela yokongeza iibrashi kwi-photoshop ngendlela elula nekhawulezayo. Njengoko besisithi, iPhotoshop ibonelela ngekhathalogu eyahluke kakhulu yeebrashi kunye nethuba lokuzenza ngokwezifiso, ngohlengahlengiso lokuziqhelanisa neemfuno zomyili.
Isixhobo sebrashi kule nkqubo, eyaziwa ngokuba bhrashi kwihlabathi le-Anglo-Saxon, ayenzelwanga kuphela umsebenzi wokuzoba, kodwa ingaba bonisa, uhombise kwaye wenze izinto ezingenasiphelo kunye nabo, kuba njengoko sele sikhankanyile, kukho iindidi ezininzi.
1 Ungazifumana phi iibrashi zokongeza kwiPhotoshop?
2 Sisebenza njani isixhobo sebrashi kwiPhotoshop
3 Uyongeza njani iibhrashi kwiPhotoshop
Ungazifumana phi iibrashi zokongeza kwiPhotoshop?
Ukuba sikhangela i-intanethi, inani elikhulu leephothali zewebhu okanye iibhlog ziya kuvela apho siya kuthi thaca khona uluhlu oluneembekiselo ezininzi zokukhuphela. Ukongeza, abanye abayili benza iibhrashi zesiko kwaye babelane ngazo nabanye abasebenzisi simahla okanye ngentlawulo encinci. Ewe kunjalo, kukho ukhetho lweebrashi zePremium ekufuneka uhlawule umrhumo ukuze uzifumane.
Ekubeni sinokufumana, njengoko sele sitshilo, uluhlu olubanzi lweekhathalogu zebrashi zamahhala kwi-intanethi, kufuneka sicace ukuba xa sikhuphela iibrashi zamahhala, abantu abaninzi banokuba nazo, ngoko ke, loo nkalo yento ekhethekileyo iyaphela ngexesha siyisebenzisa kwiprojekthi yethu.
Into ebaluleke kakhulu nayo kufuneka ithathelwe ingqalelo, kwaye lilayisensi ezikhutshelwa ngayo ezi brashi. Ngokuqhelekileyo bangena ngaphantsi kwe-a ilayisensi engeyiyo eyorhwebo, esikhokelela kwinto yokuba azinakusetyenziswa kwiiprojekthi eziza kuthengiswa kamva.
Ukukhangela ngcono, ingcebiso esikunika yona kukuba xa usenza olo phendlo, bhala "X iibhrashi ze-Adobe Photoshop", oko kukuthi, bonisa uhlobo lwebrashi oyifunayo, ngoko ke iziphumo ziya kuba zithe ngqo kwaye awuyi kulahlekelwa lixesha. ukukhangela kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo.
Sisebenza njani isixhobo sebrashi kwiPhotoshop
Isixhobo sebrashi yenye ye kakhulu esetyenziswa ziingcali yelizwe loyilo.
Siza kuvula inkqubo, kwaye siya phezulu apho ibar yamathuluzi iboniswa. Into yokuqala esiza kuyenza kukudala i iseyile entsha Ukukhetha ukhetho lwefayile, kwaye siya kudala enye kwaye emva koko, siya kuyinika amaxabiso esiwadingayo, singayenza ngokwezifiso okanye sithathe ifomathi eyilwe kwangaphambili.
Nje ukuba senze i-artboard yethu yenziwe, siya kukhangela isixhobo sebrashi, ekulula kakhulu ukuyifumana. Sikhomba ithebhu yefestile kwibar yesixhobo, kwaye imenyu iboniswa apho sinokufumana khona, ezantsi, i iibrashi ukhetho.
Kuvela ifestile apho isibonisa ibrashi esinayo ngalo mzuzu. Kodwa nge-toolbar, sinokufikelela kwiisetingi apho sinikelwe khona zonke iinketho ezikhoyo, khetha ubungakanani, ubunzima, uhlobo lokubetha kwaye ngokuqinisekileyo sinikwe ukukhetha phakathi kweebrashi ezifakwe kwi-Photoshop ngokungagqibekanga. Nje ukuba sibe nebrashi yethu singaqhubeka siyiqwalasele ngokuyinika umbala, i-opacity kwaye singakwazi nokuhlela igama layo.
Inyathelo lokuqala ekufuneka silithabathe khuphela ingqokelela yebrashi ukuba sifuna, kule meko I-Watercolor Photoshop Brushes, unokufumana uluhlu lweebhrashi zePhotoshop zasimahla apha ngezantsi kwelinye lamanqaku ethu.
Iifayile ze-Photoshop Brushes eziyi-100 zamahhala
Nje ukuba ipakethe yebrashi ikhutshelwe, enye ye Amanyathelo angachanekanga aqhele ukwenziwa kukukopa ezo fayile kwifolda yeebrashi zePhotoshop, kwaye yintoni ebangela oku kukuba zivele ngabanye kwaye kungekhona njengengqokelela, eyona nto siyifunayo.
Ukuze oku kungenzeki, eyona ndlela ilungileyo kukukhuphela iseti yeebrashi kwaye ngaphambi kokuthatha inyathelo lokufakela iifayile, yakha eyakho ingqokelela, kwaye siyakufezekisa oku ngokwenza incwadi eneenkcukacha kwidesktop yekhompyuter yethu, kwaye sikhuphela iifayile ebesithetha ngazo, eziqulathe iibrashi esizifunayo.
Ngokomzekelo, sikhuphela isethi ye-Watercolor Photoshop Brushes, yenza ifolda ethi "Watercolor Brush Collection" kwideskithophu yethu kwaye ukopishe iifayile eziye zatsho iibrashi.
Inyathelo elilandelayo kukuvula inkqubo kwaye ukhethe isixhobo ibrashi, njengoko besichazile ngaphambili. Siya kwimenyu ye-hamburger phezulu ngasekunene kwefestile yebrashi, kwaye ujonge ukhetho umphathi oseta ngaphambili. Kwicala lasekunene kukho amaqhosha amabini, elinye lenziwe kwaye elinye lokulayisha, sikhetha le yesibini kwaye ingqokelela yeebrashi esizenzileyo iya kuvela.
Xa sele silayishiwe iibrashi zethu, sizikhetha kwaye sinikeze ukhetho gcina iSeti, kwaye iya kusithumela ukuba siyinike igama kwakhona ifayile kwaye sikhetha indawo ukuyigcina ukuze sikwazi ukuzisebenzisa kwiPhotoshop.
Siza kuvula inkqubo, yiya kwisixhobo sebrashi kwaye sijonge imenyu yeenketho, apho ingqokelela esisanda kuyilayisha iya kuvela. Ngokuqhelekileyo, idla ngokuvela ezantsi, ngoko kuya kufuneka siyikhangele ekupheleni koluhlu xa sifuna ukuyisebenzisa.
Eyona nto ibalulekileyo ukuba uyaqala okanye ukuba sele uyingcali yoyilo kufuneka ulungelelaniswe, kwaye oku, njengoko sichazile, xa sifuna kwaye ukhuphela isethi yeebrashi, kufuneka yenziwe ngendlela ehlelekile, ngaphandle koko kuya kuba nzima kakhulu ukuba usebenze.
Ukugqiba inqaku kufuneka sikuxelele oko Kuya kufuneka ulumkele uguqulelo lwenkqubo yePhotoshop oyifakileyo kwikhompyuter yakho. Sifuna ukukulumkisa, kuba amanye amanyathelo okanye iindlela zinokuguqulwa ngokuxhomekeke kuguqulelo lwenkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uyongeza njani iibhrashi kwiPhotoshop